Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd yasekwa ngo-1998, kuba inkampani ka-Hebei XiongYe Group inkampani. Iqela le-Hebei XiongYe libandakanya i-xinji City changxing umatshini weplastiki womatshini, u-Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd, u-Hebei Nuohang Technology Co., Ltd.
Siliqela leqela elivelisa ikakhulu oomatshini begwebu, ukupakisha amagwebu, ukuhombisa amagwebu, ukuntywila kwentlanzi amagwebu, ubugcisa bephepha elinamagwebu, imihombiso yeKrisimesi kunye nezinto zokwenza izinto. Oko kwamiselwa le nkampani, besinamathele "ekuxhatshazweni, ukuthembeka, ukuvelisa izinto ezintsha, kunye nobungcali" njengesiseko kunye neemfuno zabathengi njengendawo yokuqala. Ukuzibophelela ekwakheni uphawu "CHX".
Inkampani yethu iqeshe abasebenzi abangaphezulu kwama-300, ngemigudu yabasebenzi bethu bonke, amandla emveliso yethu yonyaka zizigidi ezili-10 zeepakethe zegwebu kunye neeseti ezili-1200 zeEPS zoomatshini. abafundi kunye neyunithi lilungu Hebei Chamber of Commerce for Rhweba ngaphakathi no Export.Currently koomatshini bethu amagwebu kunye nempahla amagwebu sele zithunyelwa eMelika, eFransi, eOstreliya, Italy kunye namanye amazwe 20 kunye nemimandla.
Sifumene isiqinisekiso se-ISO14001 solawulo lokusingqongileyo, iCandelo lamaLungu e-Hebei Foam Chamber of Commerce, isatifikethi se-CE, isatifikethi seROHS, isiqinisekiso seTUV saseJamani.
Sisebenzisene neTonga Walmart kunye neChina Civil Engineering Group Co., Ltd.
Inkampani yethu ibekwe kufutshane Shijiazhuang, Tianjin, Qingdao, siyakonwabela ulwandle elula, kaloliwe, uthutho lomoya.